क्रोएसियाको नयाँ रेकर्डः ६८ वर्षपछि विश्वकप फाइनलमा पुग्ने सानो देश, जनसंख्या मात्र ४० लाख ! – Everest Dainik – News from Nepal
क्रोएसियाको नयाँ रेकर्डः ६८ वर्षपछि विश्वकप फाइनलमा पुग्ने सानो देश, जनसंख्या मात्र ४० लाख !
मस्को । रुसमा जारी २१औं फिफा विश्वकप फुटबलमा पूर्वी यूरोपको एक सानो देश क्रोएसियाले शानदार प्रदर्शन गरेको छ । त्यहि उत्कृष्ट प्रदर्शनका कारण क्रोएसियाले विभिन्न किर्तीमान कायम गर्यो, र विश्वकपको फाइनलमा पुग्न सफल भयो ।
विश्वकपमा खेल्नुभन्दा पहिली क्रोएसियाको नाम धेरैलाई थाह थिएन । तर उसले वल्र्डकपमा गरेको उत्कृष्ट प्रदर्शनले कयौंले क्रोएसियालाई चिनेका छन् । पहिलो पटक विश्वकप फाइनलमा पुगेको सानो देश (जनसंख्याको आधारमा) क्रोएसियाका धेरै कुरा निकै रोचक छन् ।
क्रोएसियाको कूल जनसंख्या ४ मिलियन तथा ४० लाख रहेको छ । अर्थात नेपालको काठमाडौं उपत्याकाको जनसंख्याभन्दा नि कम । ६८ वर्षपछि यति सानो देश विश्वकपको फाइनलमा पुग्न सफल भएको हो । योभन्दा पहिले १९५० को विश्वकप फाइनलमा कम जनसंख्याको हैसियतमा उरुग्वे पुगेको थियो ।
विश्वकप फाइनल खेल्ने सबैभन्दा युवा देश
क्रोएसिया विश्वकप फाइनल खेल्ने सबैभन्दा युवा देश बनेको छ । क्रोएसिया १९९१ मा स्वतन्त्र भएको थियो । विश्वकपमा आफ्नो पहिलो खेल खेल्न उसले १९९८ को पर्खाइ गर्नु परेको थियो ।
१९९८ मा फ्रान्समा भएको विश्वकपमा क्रोएसियाले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको थियो । उसले जमैका, जापान, रोमानिया र जर्मनीको हराएर सेमिफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको थियो ।
सेमिफाइनलमा आयोजक फ्रान्ससँग क्रोएसियाले २- १ ले हार बेहोर्नु परेको थियो । त्यसबेला क्रोएसियाले तेस्रो र चौथो स्थानको खेलमा नेदरल्याड्सलाई २ १ ले हराउँदै शानदार विदाइ लिएको थियो । यो पटक फाइनलमा इंग्ल्याण्डसँग १९९८ का बदला लिने मौका छ ।
अहिलेसम्म फ्रान्स र क्रोएसिया पाँच पटक भिडेका छन् । जसमा ३ पटक फ्रान्सले जितेको छ, भने २ पटक खेल बराबरीमा टुंगिएको थियो । यो तथ्यांकले क्रोएसियाका लागि चिन्ता बढाएको छ । यद्यपि उ आत्मविश्वासकासाथ मैदान उत्रिने छ । -एजेन्सी
ट्याग्स: Fifa world cup 2018, France vs cortia